एक जना कोरियन नेपाली ‘ब्ल्याक याक’ ब्राण्डले कसरि अर्बपति बने ?? – Hotpati Media
एक जना कोरियन नेपाली ‘ब्ल्याक याक’ ब्राण्डले कसरि अर्बपति बने ??
२० चैत्र २०७५, बुधबार २०:०८ मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
एकजना कोरियाली नेपाल घुम्न आए । एउटा नाम लिएर गए । त्यो नेपाली नाममा आफ्नो कम्पनीको नाम राखे । त्यसपछि सुरु भयो उनको अर्बपति बन्ने यात्रा ।
अर्बाैं रुपैयाँको भएको छ चर्चित फेसन ब्राण्ड ‘ब्ल्याक याक’ । विश्वभरी फैलिएको छ ब्ल्याक याकको आउटलेट । यो कम्पनी कति ठूलो छ भने यसका मालिक तेई सुन काङलाई कम्पनीमा कति कामदार छन् भन्ने पनि थाहा छैन । विश्वभरी फैलिएको आउटलेट कति छ भन्ने पनि थाहा छैन ।
उनी भन्छन्– ‘मेरो कर्पोरेटमा मात्र कति कर्मचारी छन् भन्ने जान्न मन लागेर केही समय पहिले सोधेको थिएँ, एक हजार ६ सय जना जति कर्मचारी रहेछन् ।’
वार्षिक दशौं करोड डलरको विश्वभरी व्यापार गर्ने यो कम्पनीमा नेपालीपन छ । किनभने यसको नाम नेपाली छ– ब्ल्याक याक । अर्थात् कालो चौरी । मालिक हुन् दक्षिण कोरियाका तेई सुन कङ्ग ।
नेपालबाट टपक्क नाम टिपे– ब्ल्याक याक । यो नाम टिपेपछि उनको दक्षिण कोरियाली कम्पनी यति फस्टायो कि विश्वव्यापी बन्यो ।
काठमाडौं आएका बेला तेई सुनले आफ्नो कम्पनीको विश्वभरीको आउटलेटको संख्या अनुमान गर्दै भने– ‘सायद एक हजार पुग्न लाग्यो ।’
तीन वर्गफुटबाट थालनी
विश्व चर्चित ब्राण्ड हो– ब्ल्याक याक । ठमेलको आफ्नै आउटलेटमा सनराइज खबर टिमसँग कुराकानी गर्ने समय उनले मुश्किलसँग निकाले । हाम्रो जिज्ञासा थियो– ‘हरेक व्यापारिक साम्राज्य जस्तै ब्ल्याक याकको साम्राज्य पनि सानै रुपमा सुरु भएको हुनुपर्छ । सुरुवात कसरी गर्नुभएको थियो ?’
उनले नहिच्किचाई भने– ‘तीन वर्ग फुटबाट ।’
‘के हो तीन वर्ग फुट भनेको ?’
उनले भने– ‘सियोलमा अर्काले पसल राखेर खालि भएको ठाउँ थियो । त्यहाँ म दिनभर उभिएर सामान बेच्थें । भोक लाग्दा खाने ठाउँ त्यहि थियो । ग्राहक नआउँदा निदाउने ठाउँ पनि त्यहि थियो । त्यो ठाउँ सिर्फ तीन वर्ग फुटको थियो ।’
एकजना दोभाषे राखेर कुराकानी अगाडि बढ्दै गयो । तेई सुन आफ्नो विगत बताउन लागे ।
५०० डलरको बीऊ
दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा ४६ वर्षअघि उनले स्थापना गरेका थिए, उनको ‘तीन वर्ग फुटको पसल ।’ पसल सुरु गर्न पैसा थिएन ।
गरिव परिवारका थिए । घर चेजु प्रान्तमा थियो । चेजुकै हल्लासन पहाडमा डुलिरहन्थे उनी । उनी सानो छँदा त्यहाँ दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको युद्ध चलिरहेको थियो । अमेरिकी सेना आफ्नो क्याम्प खडा गरेर बसेको थियो ।
ती सेनाले बोक्ने ठूलाठूला ब्यागहरु पुरानो भएपछि फालिदिन्थे । तेई त्यो ब्याग कहाँ कहाँ फालिएको छ, खोज्थे । टिप्थे । अनि ल्याएर फाटेको ठाउँमा सिलाउँथे । च्यातिएको ठाउँमा अर्काे कपडा हालेर मिलाउथे । ती ब्याग बेच्थे । ब्याग बेचेको आम्दानीले उनको घर परिवार चल्न थाल्यो ।
यहि काम गरेर धेरथोर पैसा जम्मा गरेका थिए । अनि अलिअलि ऋण गरे । करिव पाँच सय डलर, अर्थात् हालको पचपन्न हजार नेपाली रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा पसल थापे ।
सस्तो पसल । तीन वर्ग फिटको पसल । तर राम्रो पसल । नेपालमा चलनचल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा उनको पसल ‘कामचलाउ पसल’ थियाे ।
पसल खोलेपछि उनले अमेरिकी सेनाको थोत्रो ब्याग बेच्न छाडे । सियोलकै एक कम्पनीबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन थाले । आफैं ब्याग सिलाउन थाले ।
सानो छँदा घर चलाउन जुन व्यापार गरे, पछिपनि उनले त्यहि व्यापारलाई बढाए । किनकी उनले बजारको ‘ग्याप’ थाहा पाइसकेका थिए । हल्लासन पहाड चढ्न जाने आरोहीहरु पहाड चढ्दा लगाउने कपडा नपाएर हैरान हुन्थे । उनले यही समस्यालाई व्यापार बनाए ।
पहाड चढ्ने कपडा बनाए, पहाड चढ्दा बोक्ने ब्याग बनाए । यसरी उद्यममा पाइला चाल्दै गए ।
त्यहिबेला हो उनले जीवनमै सबैभन्दा धेरै काम गरेको । त्यहि बेला हो– खान र सुत्न समेत बेलाबेला बिर्सिएको । किनकी २४ वर्षको एउटा ठिटोले सपना देखिसकेको थियो । संसारकै एक नम्बर ब्राण्ड बनेको सपना ।
दोभाषे मार्फत् आफ्ना कुरा सुनाउँदा उनी उत्साही देखिन्थे ।
करिव १५ वर्षसम्म उनले निकै मेहेनत गरे । व्यापारले धेरथोर प्रगति गरेकै थियो । आफ्नै ‘रेगुलर कस्टमर’ बनाइसकेका थिए । सियोलको लोकल ब्राण्डमा आफू र आफ्नो कम्पनीलाई चिनाइसकेका थिए । त्यसबेला उनको कम्पनी ‘जायन्ट’ नामबाट चल्दथ्यो । ‘जायन्ट’ अर्थात् भीमकाय ।
पछि सियोलमै अर्काे आउटलेट स्थापना गरे । तीन वर्ग फुटको पसलले छलाङ मार्याे । त्यसले पनि निकै राम्रो व्यापार ग¥यो । अब हिम्मत बढ्न थाल्यो । विस्तारै पसलको लगानी बढ्न थाल्यो । अब सपनाले पनि छलाङ मार्ने जस्तो देखियो ।
नेपाल यात्रा, तेईको सौभाग्य
कुरा सन् १९९१ को हो । २८ वर्ष अघि । तेई पहिलो पटक नेपाल घुम्न आए । हिमालय भ्रमणमा गए । चो यु हिमाल क्षेत्रतिर पुगेका थिए । त्यहाँ चौरी देखे । असाध्यै मन पर्यो चौरी ।
नेपालको मीठो याद बोकेर उनी कोरिया फर्किए ।
कोरिया पुग्नासाथ उनले एउटा निर्णय गरे । असाधारण थियो त्यो निर्णय– ‘जायन्ट’ ब्राण्डको नाम फेरेर ‘ब्ल्याक याक’ बनाए । ‘ब्ल्याक याक’ नाम असाध्यै आकर्षक मात्र ठहरिएन, भाग्यमानी पनि ठहरियो । उनको व्यापार दोब्बर चौब्बर हुन थाल्यो ।
नेपालको कालो चौरी तेईका कारण विश्वव्यापी रुपमा ब्ल्याक याक नामले चर्चित हुन थाल्यो ।
अहिलेकाे ब्ल्याक याक
सन् १९९८ ‘ब्ल्याक याक’को लागि अर्काे सुखद दिन थियो । ‘ब्ल्याक याक’ दक्षिण कोरियाको घेराबाट बाहिर निस्किएर विश्वबजारमा पस्यो । पहिलो खुड्किला थियो– चीन ।
चीनमा ‘ब्ल्याक याक’को आउटलेट विस्तार गरेपछि, ‘ब्ल्याक याक’ विश्वमा विस्तारै चिनिन थाल्यो । चीनमा ब्ल्याक याक ब्राण्ड यति चल्यो कि धमाधम आउटलेट खुल्न थाले । चीनमा अहिले उनको दुई सय ३० वटा जति आउटलेट छ ।
बत्ती मुनि अँध्यारो भनेजस्तै नेपाली नामको यो ब्राण्ड नेपालमा चाहिँ आइपुगेन । सन् २०१२ मा मात्र ‘ब्ल्याक याक’ आफ्नो नामकरण भएको भूमि नेपाल आयो । ठमेलमा एउटा आउटलेट खुल्यो । नेपालमा अब आउटलेट मात्र चलाउने होइन, एउटा उत्पादन युनिट नै खोल्ने विचारमा छन् तेई ।
सन् २०१३ मा ‘ब्ल्याक याक’ यूरोप पस्यो । यूरोप प्रवेशको बेला उनले घोषणा गरे– ‘सन् २०१५ भित्र ‘ब्ल्याक याक’ एसियाकै टप फेशन ब्राण्ड बन्नेछ । सन् २०२० भित्रमा विश्वकै टप हुनेछ ।’
यूरोपको बजार र यूरोपका फेशन ब्राण्डहरुमा तेईको घोषणाले ठूलो तरंग ल्यायो ।
अहिले ब्ल्याक याक एसियाको टप फेसन ब्राण्ड मानिन्छ । तर, ब्ल्याक याक सन् २०२० भित्र विश्वको टप फेशन ब्राण्ड बन्छ त ? यसको जवाफ भविष्यको गर्भमा छ ।
भविष्यको गर्भमा के छ भन्ने अहिले नै आकलन गरौं । यूरोपमा उनको दुई सय ५० भन्दा बढी आउटलेट स्थापना भइसकेको छ । पाँच सय डलरबाट थालेको यात्रा ५० करोड डलरमा पुगिसकेको छ । कम्पनीको वार्षिक वृद्धि दर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
एउटा टप ब्राण्डमा हुनुपर्ने यावत गुण ब्ल्याक याकमा छ । यो ब्राण्डमा नेपाली नामको सुगन्ध छ । त्यसैले शुभकामना दिउँ– याक ब्राण्ड विश्वकै टप ब्राण्ड बन्नोस् । -sunraisekhabar
#विक्रम केसी / असीम तिमल्सिना